utah WIC | JPMA, Inc
ကျနော်တို့ WIC အစီအစဉ်မှသင်နှင့်သင့်မိသားစုကြိုဆိုပါတယ်။ သငျသညျခေါ်ဆိုမှုအားဖြင့်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုမခေါ်ပါ: 1-877-WIC-KIDS (1-877-942-5437)။ WICShopper အက်ပလီကေးရှင်းမှာအခက်အခဲရှိပါသလား။ JPMA ကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ WICShopper@jpma.com
သငျသညျ WIC အသစ်ဖြစ်ပါသလား အောက်က Utah WIC အရှေ့တိုင်းဆန်ကဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ
Utah WIC ဗီဒီယိုများ
Utah WIC အရှေ့တိုင်းဆန် - အင်္ဂလိပ်
Video to orientación WIC - Español
WIC ကိုGuía de compradores
နောက်ဆုံးရက် ၃၀ မှလျှောက်ထားသူတစ် ဦး စီ၏ Medicaid ကတ်သို့မဟုတ်အိမ်ထောင်စုလစာရှင်းတမ်းများကဲ့သို့သောဝင်ငွေအထောက်အထား။ အပတ်စဉ်ပေးချေပါကလစာရှင်းတမ်းလေးခုယူလာပါ။ အပတ်စဉ် (သို့) နှစ်ကြိမ်လစဉ်လစာရှင်းတမ်းနှစ်ခုယူလာသည်။ အားလုံးဝင်ငွေအရင်းအမြစ်များ။
လက်ရှိအသုံး ၀ င်ငွေတောင်းခံလွှာ၊ လက်ရှိငှားရမ်းခ (သို့) ပေါင်နှံငွေတောင်းခံလွှာနှင့်ပြေစာကဲ့သို့လိပ်စာ၏အထောက်အထား။ ၎င်းတွင်သင်၏လမ်းလိပ်စာကိုရိုက်နှိပ်ရမည်။
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ မွေးစာရင်း၊ Medicaid ကဒ် (သို့) ဓာတ်ပုံ ID အစရှိသောလူတစ် ဦး စီ၏အထောက်အထားများကိုသက်သေပြရမည်။ မွေးကင်းစကလေးငယ်များသည်ပုခက်ကတ် (သို့) မွေးကင်းစ ID ပုံစံကိုသုံးနိုင်သည်။ အသက် ၁ နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများသည်မွေးစာရင်း၊ Medicaid ကတ် (သို့) ဓာတ်ပုံ ID လိုအပ်သည်။
မိဘ (သို့) အုပ်ထိန်းသူသည်အောင်လက်မှတ်ချိန်းဆိုရာတွင်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
Prueba de ingresos, como la tarjeta de Medicaid de cada participante o talónes de check de pago de los últimos 30 días de todas las personas que viven en el hogar ။ Si cobra semanalmente, traiga los últimos cuatro talónes de စစ်ဆေးသည်။ Si cobra en forma quincenal o dos veces al mes, traiga los dos últimostalónes de စစ်ဆေးသည်။
Prueba de domicilio, como una factura de servicios públicosအမှန်တကယ် o un recibo o una factura de alquiler o hipoteca အမှန်တကယ် Debe tener su dirección impresa ။
Prueba de identidad para cada persona que será certificada, como licencia de conducir, Acta de nacimiento, tarjeta de Medicaid o identificación con foto ။ Los bebés pueden usar la tarjeta del cunero (crib card) o el formulario de identificación de recién nacido ။ Los niños de un año o más requieren el acta de nacimiento, una tarjeta de Medicaid o una identificación con foto ။
Prueba de la tutela Si es no el padre o la madre del niño, deberá presentar la prueba de tutela ကိုသုံးသည်။
Los bebés y niños que desea certificar ဖြစ်သည်။
Registros de vacunación de sus hijos si estánလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်သည်။
El padre, la madre o un tutor debe estar presente en las citas de certificación။
WIC အစားအစာများကိုတရားဝင်စတိုးဆိုင်များတွင်သာဝယ်ယူပါ။ စတိုးဆိုင်အများစုတွင်၎င်းတို့ကို Utah eWIC ကဒ်အားလက်ခံကြောင်းဖော်ပြသည့်စတစ်ကာများပါလိမ့်မည်
သင်၏ eWIC ကဒ်နှင့်သင်၏မိသားစုစားနပ်ရိက္ခာခံစားခွင့်များစာရင်းသို့မဟုတ်ကဒ်လက်ကျန်ငွေကိုသင်နှင့်အတူစတိုးဆိုင်သို့ယူသွားပါ။
Utah WIC သည်တိကျသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အထုပ်အရွယ်အစားများကိုခွင့်ပြုသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုရှာရန်အခက်အခဲရှိပါကစတိုးဆိုင်ဝန်ထမ်းများနှင့်ပြောဆိုပါ။ WIC ၏ခွင့်ပြုထားသောကုန်ပစ္စည်းစာရင်းတွင်မပါသည့်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်သင့်အားစတိုးဆိုင်များတွင်ခွင့်မပြုပါ။ သင် ၀ ယ်ရန်ခွင့်မပြုသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုသည်သင်တရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုသင်တွေ့ရှိပါက၎င်းကိုပြည်နယ် WIC ရုံးသို့သုတေသနလုပ်ရန်အစီရင်ခံနိုင်သည်။ ၎င်းကို WIC Shopper အက်ပ်မှတဆင့်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းဖြင့်သတင်းပို့နိုင်သည် icupc@utah.gov.
သင်၏ WIC အစားအစာများကိုရွေးချယ်သောအခါကျန်ရှိနေသေးသောအောင်စများသို့မဟုတ်ကွန်တိန်နာများကိုသေချာစေရန်သေချာစွာစောင့်ကြည့်ပါ
သင်ရွေးချယ်သောအထုပ်အရွယ်အစားသည်သင်၏မိသားစု eWIC ကဒ်ထဲသို့ထည့်သည့်ပမာဏနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။
သင်၏ eWIC ကဒ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါငွေရှင်းကောင်တာ၏ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ငွေပေးချေမှုအစတွင်သင်၏ကဒ်ကိုထည့်ရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သင်၏ WIC အစားအစာများကိုအခြားဝယ်ယူမှုများနှင့်ခွဲရန်မလိုအပ်ပါ။
က။ ဒုတိယငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကသင်၏ငွေပေးချေမှုကာလအတွင်းသင်၏ eWIC ကဒ်ပြားပေါ်လာမည်ကိုပြောပြသည်။ WIC ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း
သင်၏ငွေလက်ကျန်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းခရီးစဉ်ပြီးလျှင်သင်၏ကဒ်ပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေသည့်အရာဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ကြိမ်သင်စျေး ၀ ယ်သည့်အခါကဒ်တွင်ကျန်ရှိနေသေးသောအရာများကိုသိရှိနိုင်ရန်သင်၏အဆုံးသတ်ငွေလက်ကျန်ကိုဆက်လက်ထားရှိပါ။
သင်၏ PIN နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ငွေရှင်းကောင်တာအားသင်၏ PIN နံပါတ်ကိုဘယ်တော့မျှမပြောသင့်ပါ။
ငွေပေးချေမှုမပြုမီ WIC ငွေပေးငွေယူကိုသင်အတည်ပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်ငွေမပေးမီပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
သင်၏ WIC ပစ္စည်းများအတွက်သင်ငွေပေးချေပြီးနောက်သင်၏သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပစ္စည်းများနှင့်ကွာခြားချက်ကိုသင်ပေးချေပြီးပေးချေနိုင်သည်
အခြားငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းနှင့်သင်၏အခြားဝယ်ယူမှု။ သင်၏ eWIC ကဒ်ဖြင့်အမြဲတမ်းငွေပေးချေပါ။
သင်၏ WIC အစားအစာများကိုငွေ၊ အကြွေးသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများအတွက်စတိုးဆိုင်သို့သင်ပြန်မပို့နိုင်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ စတိုးဆိုင် ၀ န်ထမ်းများကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံပါ။
ပြtheနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကသင်၏ WIC ဆေးခန်းသို့မဟုတ်ပြည်နယ် WIC အစီအစဉ်ကို 1-877-WIC-KIDS သို့ခေါ်ဆိုပါ။ သေချာအောင်လုပ်ပါ
စတိုးဆိုင်အမည်၊ ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ ပါ ၀ င်သူများ၏အမည်များကိုမှတ်သားထားရန်နှင့်သင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုသိမ်းဆည်းရန်။
A: သငျသညျလျော့နည်းသို့မဟုတ်သင်မှပေးထားသော WIC အစားအစာများကိုအဘယ်သူအားမျှဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်ပါကအဘယ်သူမျှမကချိုးဖောက်ရာမဟုတ်ပါဘူး။
A: အချို့အစားအစာများအတွက်အစားထိုးအနည်းငယ်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ သင်၏အစားအစာအထုပ်ကိုပြောင်းလဲရန်သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုဆွေးနွေးရန်သင်၏ WIC ဆေးခန်းသို့ဆက်သွယ်ပါ။ စတိုးဆိုင်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်အစားထိုးခြင်းမပြုရ။
A: WIC အစားအစာများကို၎င်းတို့အတွက်ထုတ်ပေးထားသူအတွက်သာရည်ရွယ်သည်။ အကယ်၍ သင်၏အိမ်တွင် WIC သက်သာခွင့်များကိုလက်ခံရရှိသူများသည် WIC မှထောက်ပံ့သောအစားအစာအချို့ကိုမစားပါကစတိုးဆိုင်သို့မသွားပါနှင့်သို့မဟုတ်ဆေးခန်း ၀ န်ထမ်းများအားသင်၏အစားအစာအထုပ်မှဖယ်ရှားပစ်ရန်တောင်းဆိုပါ။ မလိုအပ်သော WIC အစားအစာများကိုသင် WIC ဆေးခန်းသို့ယူဆောင်လာပါ။
A: သင့်ရဲ့ WIC ဆေးခန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်တစ်ဦးအာဟာရနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှငျ့သငျမှရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာဆှေးနှေးပါမညျ။
Q: eWIC ကဒ်ဆိုတာဘာလဲ။
A: eWIC ကဒ်သည်ပါဝင်သူသည်ကုန်စုံစတိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်များကိုရရှိသည်။
Q: SNAP သက်သာခွင့်များနှင့် WIC အကျိုးခံစားခွင့်များသည်ကဒ်တည်းတွင်သာရှိပါသလား။
A: မရှိပါ။ WIC အစီအစဉ်အတွက် eWIC ကဒ်သည် SNAP အစီအစဉ်အတွက် EBT ကဒ်နှင့်သီးခြားဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
Q: သင်တန်းသားများသည်ပုံနှိပ်ထားပြီးသားဖြစ်သောသူတို့၏စစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သေး ဦး မလား။
A: ဟုတ်တယ်။ ပါ ၀ င်သူများသည်၎င်းတို့ကုန်ပစ္စည်းများကုန်ဆုံးချိန်အထိစစ်ဆေးမှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအစားအစာအထုပ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ချက်လက်မှတ်များခိုးယူခံရခြင်းမရှိပါက eWIC ကဒ်သို့စောစီးစွာပြောင်းရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
Q: eWIC ကတ်သည် (၃) လကြာအကျိုးခံစားခွင့်များကိုယင်းသို့တင်ဆောင်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်တယ်။ eWIC ကတ်သည် (၃) လကြာအကျိုးခံစားခွင့်များကိုကိုင်ဆောင်ထားနိုင်သည်။ အသုံးမပြုသည့်အကျိုးခံစားခွင့်များသည်လက်ရှိစစ်ဆေးရေးစနစ်နှင့်အလားတူစွာသက်တမ်းကုန်ဆုံးလိမ့်မည်။ ပါ ၀ င်သူများသည်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အာဟာရဆိုင်ရာပညာရေးကိုရရှိရန် WIC ဆေးခန်းသို့ပြန်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
Q: WIC ရှိအိမ်ထောင်စုဝင်အားလုံးအတွက်ကဒ်ပြားတစ်ခု (၁) ရနိုင်မလား။
A: ဟုတ်တယ်။ အိမ်ထောင်စုတစ်ခုတည်းရှိ WIC ရှိမိသားစုဝင်အားလုံးသည်ကဒ်ပြားတစ်ခု (၁) ခုခံစားခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ မွေးစားကလေးများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကတ်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ လာမည့်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုထပ်မံထည့်သွင်းရန်အတွက်ဤကတ်ကိုသင်ချိန်းဆိုချိန်တိုင်းတွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ဒီကဒ်ကိုမသုံးသင့်ပါဘူး။
Q: PIN နံပါတ်ကိုဘယ်သူပြောင်းလဲနိုင်လဲ။
A: eWIC ကဒ်ပြားအတွက် PIN ကိုအိမ်ထောင် ဦး စီး (မိဘ / အုပ်ထိန်းသူ) သာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါကိုဆေးခန်းမှာလုပ်တယ်။
Q: သင်တန်းသားများသည်သူတို့၏ eWIC ကဒ်ပြားကိုကုန်စုံစတိုးဆိုင်တွင်ပြသရန်လိုအပ်ပါသလား။
A: မရှိပါ။ ကုန်စုံစတိုးရှိ eWIC ကဒ်ဖြင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်မလိုအပ်ပါ။ PIN နံပါတ်သည်ပါ ၀ င်သူ၏ကဒ်ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မှတ်ပုံတင်ဖြစ်သည်။
Q: စတိုးမှာ eWIC ကတ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မှာလဲ။
A: အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုအသုံးပြု။ အလွန်ဆင်တူဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တန်းသားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့၏ WIC ခွင့်ပြုထားသောပစ္စည်းများအတွက် ၀ ယ်သည်။ ငွေထုတ်ပေးသည့်အခါ eWIC ကဒ်ကိုကဒ်ဖတ်စက်ထဲသို့ထည့်ပြီး WIC မှအတည်ပြုထားသောပစ္စည်းများသည်ကဒ်ပေါ်ရှိအကျိုးခံစားခွင့်အထုပ်၏လက်ကျန်ငွေမှနှုတ်ယူလိမ့်မည်။ အသုံးမပြုသည့်အကျိုးခံစားခွင့်များသည်ကဒ်ပြားပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးည၏သန်းခေါင်အချိန်တွင်ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
Q: ပါ ၀ င်သူကဒ်ပျောက်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
A: ပါဝင်သူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့၏ eWIC ကဒ်ပျောက်ဆုံးပါက၎င်းသည် Hot Card စာရင်းတွင်ပါလိမ့်မည်။ ၃ ရက်စောင့်ဆိုင်းပြီးနောက်မိဘ / အုပ်ထိန်းသူသည် WIC ဆေးခန်းသို့အသစ်တစ်ခုရရှိရန်သင့်လျော်သောအထောက်အထားအထောက်အထားများဖြင့်လာနိုင်သည်။
Q: လက်လီရောင်းချသူများကချက်လက်မှတ်များနှင့် eWIC ကဒ်များကိုလက်ခံပါသလား။
A: ဟုတ်တယ်။ eWIC သို့ကူးပြောင်းရာတွင်လက်လီရောင်းချသူများသည် eWIC ကဒ်များနှင့်ချက်လက်မှတ်များကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ eWIC အကူးအပြောင်းကို Weber, Morgan, Davis နှင့် Summit ခုတို့၏ရှေ့ပြေးစမ်းသပ်areaရိယာ၌စတင်လိမ့်မည်။ ထိုဒေသများရှိစတိုးဆိုင်များသည် ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်တွင်ကတ်များကိုလက်ခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။ အခြားတိုင်းပြည်ရှိစတိုးဆိုင်များသည် ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် eWIC ကဒ်များကိုလက်ခံရန်အသင့်ဖြစ်သင့်သည်။
Q: eWIC ကဒ်များကိုကိုယ်တိုင်ငွေရှင်းကောင်တာများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
A: လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှနည်းပညာတိုးတက်နေဆဲဖြစ်သည်။ စတိုးဆိုင်များအဆင်သင့်ဖြစ်ချိန်တွင် Utah WIC သည်ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
Q: တက်ရောက်သူများသည်သူတို့၏ Utah eWIC ကဒ်ဖြင့်အခြားပြည်နယ်များရှိစျေးဝယ်နိုင်သလား။
A: Utah eWIC ကဒ်များကို Utah ခွင့်ပြုထားသော WIC လက်လီအရောင်းဆိုင်များတွင်သာလက်ခံပါသည်။
Q: မွေးစားကလေးများ၏ eWIC ကတ်များသည်အခြားမိသားစုသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း။
A: eWIC ကဒ်သည်မွေးစားကလေးနှင့်လိုက်သင့်သည်။ မွေးစားကလေးတစ် ဦး ချင်းစီကို၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင် eWIC ကဒ်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ မွေးစားကလေးများစွာသည်အိမ်တစ်အိမ်တွင်နေထိုင်ပါကအခွင့်အာဏာရှိသောကိုယ်စားလှယ်သည်ကဒ်တစ်ခုစီကိုကလေး၏အတိုကောက်များဖြင့်တံဆိပ်ကပ်နိုင်သည်။
Q: eWIC ကတ်များကိုစတိုးဆိုင်တိုင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
A: Utah eWIC ကဒ်များကို EWIC အဆင်သင့်ဖြစ်သော WIC တရားဝင်စတိုးဆိုင်များတွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤစတိုးဆိုင်များတွင် Utah eWIC သည်ကြိုဆိုသောတံဆိပ်ပါရှိသည်။ စတိုးဆိုင်ဝင်ပေါက်အနီးတွင်ရှိသည်။
Q: WIC အတည်ပြုပြီးသောစားနပ်ရိက္ခာစာရင်းရှိပစ္စည်းတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏ eWIC ကဒ်မှငွေတောင်းခံ။ ထုတ်ယူခြင်းမခံရပါကဘာလုပ်ရမည်နည်း။
A: ပစ္စည်းများအားလုံးကိုစစ်ဆေးပြီးနောက် WIC မှအတည်ပြုထားသောအစားအစာများကို eWIC ကဒ်မှနှုတ်ယူလိမ့်မည်။ သင်၏ ၀ ယ်ယူမှုကိုအတည်ပြုရန်သော့ကိုနှိပ်ခြင်းမပြုမီပစ္စည်းများကိုမှန်ကန်စွာဖြတ်တောက်ကြောင်းသေချာစေရန်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုစစ်ဆေးပါ။
Q: WICShopper လျှောက်လွှာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
A: WICShopper သည်အထူးပြု WIC စမတ်ဖုန်း application တစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာသည် WIC မှခွင့်ပြုထားသောအစားအစာများကိုကုန်စုံစတိုးဆိုင်တွင်ဖော်ထုတ်ရန်သင်တန်းသားများကိုကူညီလိမ့်မည်။ ဤလျှောက်လွှာသည်ပါဝင်သူများအားပစ္စည်းတစ်ခု၏ Universal Product Code (UPC) ကိုစစ်ဆေးခြင်းမပြုမီ WIC မှအတည်ပြုသောပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာတွင် WIC သင်တန်းသားများကို WIC အစီအစဉ်မှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိစေရန်ကူညီရန်အခြားအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။
Q: ကျွန်ုပ်၏ eWIC ကဒ်ကိုဘယ်အချိန်မှာရမလဲ။
A: သင်၏ဒေသဆိုင်ရာအေဂျင်စီသည် eWIC သို့ကူးပြောင်းပြီးနောက်သင်၏သတ်မှတ်ထားသောရက်ချိန်းတွင်သင်၏ eWIC ကဒ်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်တွင်အစားအစာအထုပ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုသို့မဟုတ်သင်၏ချက်လက်မှတ်များပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရခြင်း မှလွဲ၍ eWIC ကဒ်သို့စောစီးစွာပြောင်းရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။
Q: ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်စုတွင်စျေးဝယ်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်အကောင့်တူကဒ်အတွက်ကဒ်ရနိုင်မလား။
သင်၏ eWIC ကဒ်ကိုစတိုးဆိုင်သို့ယူသွားရန်မမေ့ပါနှင့်!
သင့်ရဲ့ Utah WIC ကိုသုံးပါသင်မဝယ်နိုင် WIC အစားအစာများကိုကြည့်ရှုရန် WICShopper (သို့မဟုတ်သင့်ပုံနှိပ်ဗားရှင်း) တွင်အစားအစာများစာရင်း (AFL) Authorized ။
Allowed - ဤပစ္စည်းများကို WIC ဘို့ခွင့်ပြုနေပါသည်! သိရန်အရာတစ်ခုမှာသင်တစ်ဦးကို item ခွင့်ပြုခဲ့ပေမယ့်သင့်ရဲ့ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်အတွက်မဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်သင် WIC နှင့်အတူကမဝယ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုတွေ့မြင်ခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ WIC အကျိုးအမြတ် WICShopper app ကိုလင့်ထားသောသည်အထိ, ဒီ "ခွင့်ပြု" မက်ဆေ့ခ်ျကိုသင့်မိသားစုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုလျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, တနှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ပြင်လုံးကိုနို့ရရှိသွားတဲ့။ သင်သည်သင်၏မိသားစုထဲမှာတစ်ဦးတည်းနှစ်အရွယ်ကလေးကရှိမထားဘူးဆိုရင်, မြေတပြင်လုံးနို့သင့်ရဲ့ WIC အစားအသောက်အကြိုးကြေးဇူးမြား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သင်သည်စစ်ဆေးမှုများရပ်တည်ချက်မှာမြေတပြင်လုံးနို့ကိုဝယ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
မ WIC ကို item - ဤ WIC ဤအကြောင်းအရာအားအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေဆိုလိုသည်။ သင်ထင်ခဲ့လျှင်သင်သည် "ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သိစေ WIC အစားအသောက်အကြိုးခံစားခှငျ့နှငျ့အတူဤအစာကိုဝယ်နိုင်ဖြစ်သင့်ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!ဒီ app ထဲမှာ "ခလုတ်ကို။
သိရှိနိုင်ဖို့မအောင်မြင်ဘူး - ဤပစ္စည်း WIC အရည်အချင်းပြည့်မီပါက app ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ဆိုလိုသည်။ ဒါဟာ store မှာဆက်သွယ်မှုရှိခြင်းမကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Wi-Fi ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်သင်ပိုကောင်းဝန်ဆောင်မှုရယူတဲ့အစက်အပြောက်ရှာတွေ့ကြိုးစားပါ။
A: ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကလတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးများနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးလို့မရပါဘူး။ သို့သော်အားလုံး၊ ကြိုတင်ဖြတ်ခြင်း၊ ဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ် dips မပါဘဲ ခွင့်ပြုထားပါသည်။ အချို့ရှိကတခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အသေးစိတ်များအတွက် app ထဲမှာသင့်ရဲ့အစားအသောက်စာရင်းကိုကိုးကားပါ။
စာရင်း de Alimentos (Español)
eWIC လျင်မြန်စွာရွေးချယ်နိုင်သောလမ်းညွှန် - အစေ့လုံး
eWIC လျင်မြန်စွာရွေးနိုင်သောလမ်းညွှန် - ပဲပင်များ
eWIC စျေးဝယ်လမ်းညွှန် —Canned Fish
eWIC လျင်မြန်စွာရွေးချယ်နိုင်သောလမ်းညွှန် - နို့
ဒိန်ချဉ်လုံး ၀ ကိုဝယ်ပါ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ WIC မှာသင်တို့ကိုတွေ့မြင်စိတ်လှုပ်ရှားနေနှင့်သင်ကူညီပေးရန်ပျော်ရွှင်များမှာ!
ကျန်းမာသောအစားအစာများဝယ်ရန်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရယူပါ။ ကျွန်ုပ် WIC သည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောအစားအစာအားလုံးကိုမထောက်ပံ့နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။
ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်သောကာကွယ်ဆေးများနှင့်အခြားကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရယူပါ။
WIC ၀ န်ထမ်းများနှင့်စတိုးဆိုင် ၀ န်ထမ်းများမှမျှတစွာ၊ လေးစားစွာဆက်ဆံမှု။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အားမျှတစွာဆက်ဆံခြင်းမရှိပါက WIC ကြီးကြပ်ရေးမှူးနှင့်စကားပြောနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ရထိုက်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသဘောမတူပါကကျွန်ုပ်သည် WIC ညွှန်ကြားရေးမှူးသို့မဟုတ်ပြည်နယ် WIC ရုံးသို့အစည်းအဝေးသို့မဟုတ်ကြားနာမှုတစ်ခုအတွက်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး။ WIC အစီအစဉ်အရည်အချင်းပြည့်မီစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်မသက်ဆိုင်လူမျိုး, အသားအရောင်, မူရင်းနိုင်ငံသား, လိင်, အသက်သို့မဟုတ်မသန်စွမ်း၏လူတိုင်းအတွက်တူညီတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အကြှနျုပျ၏ဝင်ငွေ။ ငါသည်ငါ့အိမ်သူအိမ်သားအပေါင်းတို့ကိုဝငျငှေသတင်းရင်းမြစ်နှင့် ပတ်သက်. န်ထမ်းကိုပြောပါလိမ့်မယ်။ ငါမဆိုပြောင်းလဲမှုများကိုအစီရင်ခံတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်သည် Medicaid၊ နောက်ဆက်တွဲအာဟာရအထောက်အပံ့အစီအစဉ် (SNAP) သို့မဟုတ်မိသားစုအလုပ်အကိုင်အစီအစဉ် (TANF) တွင်ကျွန်ုပ်ပါ ၀ င်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်သည် WIC အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီစေသောအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါက WIC အားကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါလိမ့်မည်။
အကြှနျုပျ၏နို့တိုက်အခြေအနေ။ ကျွန်မနို့တိုက်ကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ရပ်တန့်မယ်ဆိုရင်ငါ WIC အကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်။
ငါ့လိပ်စာ။ ကျွန်ုပ်၏လိပ်စာ (သို့) ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အပြောင်းအလဲများကိုသတင်းပို့ပါမည်။ ကျွန်ုပ်ပြည်နယ်မှ WIC ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ပြည်နယ်မှထွက်ခွာသွားပါကအတည်ပြုခြင်းအတည်ပြုချက် (VOC) တောင်းခံနိုင်သည်။
လေးစားသမှုဖြင့်ဆေးခန်းန်ထမ်းများနှင့်စတိုးဆိုင်န်ထမ်းဆက်ဆံပါ။ ငါကျိန်ဆိုကြီးတွေ, ခြိမ်းခြောက်သို့မဟုတ်မည်သူမဆိုထိခိုက်စေမည်မဟုတ်။
ကျွန်ုပ်၏ WIC အစားအစာများကိုသူတို့ထုတ်ပေးသောမိသားစုဝင်များအတွက်သုံးပါ။
ကျွန်ုပ်၏ WIC အစားအစာများ၊ မွေးကင်းစကလေးများအတွက်ဖော်မြူလာ (သို့) eWIC ကဒ်များကိုရောင်းချရန်၊ ထုတ်ပေးရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်ဘယ်တော့မျှမပေးပါနှင့်။ ၎င်းတွင်၎င်းတို့အားအွန်လိုင်းတွင်တင်ခြင်းသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်သို့ပြန်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်ရောင်းရန်သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းသည့်မည်သည့်အစားအစာသို့မဟုတ်ပုံသေနည်းမဆို WIC အစားအစာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ရရှိသောပုံသေနည်းသည် WIC အစားအစာဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်လိမ့်မည်။ အစားအစာသို့မဟုတ်ပုံသေနည်းအတွက်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
တစ်ကြိမ်တွင် WIC ဆေးခန်းတစ်ခုမှအကျိုးခံစားခွင့်များကိုရယူပါ။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဟာတရားမ ၀ င်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်၏ eWIC ကဒ်ကိုဆေးခန်းသို့သွားသောအခါကျွန်ုပ်၏သက်သာခွင့်များကိုကဒ်သို့သွင်းနိုင်စေရန်ယူဆောင်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ eWIC ကဒ်ကိုဒက်ဘစ်ကတ်ကဲ့သို့ကာကွယ်ပြီး၎င်းကိုပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ခိုးယူခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်ဆီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်။
ကျွန်ုပ်၏ eWIC ကဒ်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရလျှင် WIC ၀ န်ထမ်းများကိုချက်ချင်းပြောပြပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကဒ်ပြားကိုအစားထိုးရန်သုံးရက်စောင့်ဆိုင်းရမည့်ကာလရှိလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသောကဒ်ပြားကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်မကြိုးစားပါ။
ဆေးခန်းရှိကျွန်ုပ်ခွင့်ပြုထားသူများ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်၏ကဒ်သို့မဟုတ် PIN နံပါတ်ကိုမည်သူ့ကိုမျှမပေးပါနှင့်။
အဆိုပါ Utah WIC အတွက်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါအစားအစာများစာအုပ်ငယ် Authorized ။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အခွင့်အရေးနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ (ရှေ့တွင်ပုံနှိပ်ထားသည်) ကိုဖတ်ပြီးသို့မဟုတ်အကြံပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤစည်းမျဉ်းများကိုမလိုက်နာပါကကျွန်ုပ်မိသားစုရရှိသောမည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးအတွက်မဆို WIC ကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်တောင်းဆိုခံရမည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အနာဂတ်အကျိုးခံစားခွင့်များဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် WIC အစီအစဉ်မှဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်ကိုလည်းနားလည်ပါသည်။
ဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုဖက်ဒရယ်အကူအညီဖြင့်လက်ခံရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ပေးသောသတင်းအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်အတည်ပြုပါသည်။ ပရိုဂရမ်ဝန်ထမ်းများသည်ကျွန်ုပ်ဆေးခန်းသို့ကျွန်ုပ်ပေးခဲ့သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုအတည်ပြုနိုင်သည်။ မှားယွင်းသောသို့မဟုတ်မှားယွင်းစွာဖော်ပြခြင်း၊ မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်သိုထားသောအချက်အလက်များအပါအ ၀ င် WIC ၏စားနပ်ရိက္ခာခံစားခွင့်များကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်ပေးသောမမှန်ကန်သောသတင်းအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်အားအစားအစာတန်ဖိုးအတွက်ပြည်နယ်အေဂျင်စီအားပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ငါ့ကိုမသင့်လျော်စွာပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအရကျွန်ုပ်အားအရပ်ဘက်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၊ ကျွန်ုပ် / မိဘ / အုပ်ထိန်းသူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်ဆေးခန်းသို့သတ်မှတ်ထားသောအပိုအုပ်ထိန်းသူတစ် ဦး အနေဖြင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်မှုများတွင်တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် proxy (တရားဝင်စျေးဝယ်သူ) ကိုသတ်မှတ်ထားပါကသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ WIC သက်သာခွင့်များကိုဆေးခန်းတွင်ကောက်ယူပြီးကျွန်ုပ်ကိုယ်စားဆိုင်၌ရှိသောကျွန်ုပ်၏ခံစားခွင့်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၄ င်းတို့၏အလေးနှင့်အလေးချိန်ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့် / သို့မဟုတ်သံဓာတ်နည်းစေရန်သွေးစစ်ဆေးရန်နောက်ဆက်တွဲလည်ပတ်မှုများလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်၏ proxy သည်ကျွန်ုပ်၏ကလေး / ကလေးများကိုဆေးခန်းသို့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် proxy ၏လုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကျွန်ုပ်တာ ၀ န်ရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်။ ဆေး ၀ န်ထမ်းများမှပေးသောမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုမဆိုမျှဝေပေးရန်ကျွန်ုပ်၏ proxy ကိုတောင်းဆိုရန်မှာကျွန်ုပ်တာ ၀ န်ဖြစ်သည်။
WIC privacy ကိုရန်သင့်ညာဘက်လေးစားပါသည်။ တစ်ဦး WIC ပါဝင်သူအဖြစ်, သင်သတိပေးချက်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ, စာလုံး, အခုတော့ရွာသားတွေ, ဒါမှမဟုတ်အီးမေးလ်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်တို့သည်ဤသတိပေးချက်များလက်ခံရရှိဖို့မတောင်းဆိုပါလိမ့်မည်။ စာသား, 22300 မှစာသားကို STOP ထဲကရွေးချယ်ဖို့။
အဆိုပါ WIC အစီအစဉ်တွင်သင့်ရဲ့ပါဝင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များ WIC အစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီပုဂ္ဂိုလ်များအစေခံသောအခြားကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရအစီအစဉ်များနှင့်အတူ Non-WIC ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် shared နိုင်ပါသည်။ ကနျြးမာရေး၏ Utah ဦးစီးဌာန၏အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးသင်သည်သူတို့၏န်ဆောင်မှုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီလျှင်ကြည့်ဖို့သေချာသောအစီအစဉ်များမှလျှို့ဝှက် WIC အချက်အလက်များ၏ထုတ်ဖော်နှင့်အသုံးပြုမှုလုပ်ပိုင်ခွင့်မူပြီ အဝေးရောက်လုပ်ဆောင်သွားရန်; သငျသညျပြီးသားပါဝင်ကြသည်အစီအစဉ်များနှင့်အတူလိုအပ်ကျန်းမာရေးသတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့, အစီအစဉ်များအကြားအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချောမွေ့ရန်, နှင့်အစီရင်ခံစာများနှင့်လေ့လာမှုများမှတဆင့် Utah မိသားစုများ၏အလုံးစုံကျန်းမာရေးအကဲဖြတ်ရန်ကူညီဖို့ရန်။ သင်တို့သည်ဤအစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်များအတွက် WIC န်ထမ်းကိုမေးလိမ့်မည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုဆိုင်ရာအစီအစဉ်ဆိုင်ရာတိုင်ကြားချက်တစ်ခုကိုတင်ပြလိုလျှင် USDA အစီအစဉ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတိုင်ကြားချက်ပုံစံ (AD-3027) ကိုအွန်လိုင်း http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html တွင်လည်းကောင်း၊ မည်သည့် USDA ရုံးခန်းတွင်မဆိုဖြည့်ပါသို့မဟုတ် အက္ခရာ USDA မှလိပ်စာနှင့်စာထဲတွင်ပုံစံအတွက်တောင်းဆိုထားသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးပေး။ တိုင်ကြားချက်ပုံစံမိတ္တူကိုတောင်းခံရန် (၈၆၆) ၆၃၂-၉၉၉၂ သို့ခေါ်ဆိုပါ။ သင်၏ဖြည့်စွက်ပြီးသောပုံစံသို့မဟုတ်စာကို USDA သို့ပေးပို့ပါ။ (၁) မေးလ် - အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၊ ၁၄၀၀ လွတ်လပ်ရေးရိပ်သာလမ်း၊ SW၊ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ၂၀၂၅၀-၉၄၁၀; (866) ဖက်စ်: (632) 9992-1; (၃) email: program.intake@usda.gov
Derechos y က Responsabilidades
DERECHOS Y ၏တုံ့ပြန်မှု
¡ Estamos Que Haya le atenderemos တစ် WIC hoy က y con Gusto venido felices!
Yo tengo el derecho တစ်ဦး:
• Recibir beneficios para comprar alimentos saludables ။ WIC အနေဖြင့်လည်းသက်သေပြနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
• la lactancia ကိုလက်ခံရရှိသည်။
•ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦး စီးဌာန၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်း။
• WIC y la la tienda ကိုလက်ခံရရှိသည်။ WIC မှကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူမဟုတ်ပါ။ ဤအစီအစဉ်သည်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ WIC ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်ခန်းစာယူခြင်းဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
•Protección de mis derechos အရပ်သားများ။ WIC မှ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည့်အရောင်၊ အရောင်၊ လိင်၊ လိင်၊ လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်ကိုက်ညီသည်။
• Privacidad ။ WIC ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို WIC တွင်တွေ့နိုင်သည်။
mis သား responsabilidades:
Entiendo Que ဝံ့información correcta y က completa acerca က de:
• Mis ingresos ။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့် mi en casa ၏သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအတွက် WIC မှသင်ခန်းစာများ။
• Medicaid တွင်ပါဝင်ခဲ့ခြင်း၊ SNAP Programa၊ Empleo အကျွမ်းတဝင် (TANF) o အစီအစဉ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို WIC မှသတင်းပေးပို့ပါ။
• Mi estado de lactancia ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ WIC မှသတင်းအချက်အလက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်သည်။
• Mi dirección။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို WIC ၏ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဌာန။ PICO သည်Verificación de Certificación (VOC) သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ရှိ WIC တစ်ခုသို့ရောက်ရှိရန်အတွက် Marmarmu fuera de Estado သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
Que debo seguir Las siguientes reglas Entiendo:
• Tratar သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ဂယက်ရိုက်ခြင်းနှင့်အငြင်းပွားမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဘယ်သူမျှမdiré malas palabras မရှိgritaréမရှိamenazaré o lastimaréanadie ။
• WIC မှ WIC မှထုတ်ကုန်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများ
•တစ် ဦး la clínica comida အပို que no usaré Devolver ။
• WIC အနေနှင့်မည်သည့်ဆက်သွယ်မှုကိုမဆို LIC alimentos de de WIC, eWIC တွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှဆက်သွယ်မှုကိုရယူနိုင်ပါသည်။ WIC သည်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကိုပြန်လည်စီးဆင်းစေခြင်းနှင့် WIC ၏အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေခြင်း၊ သင့်အနေဖြင့်ရလဒ်ကောင်းများကိုရယူနိုင်ပါသည်။
• Recibir အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုala vez ။ WIC အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်
• EWIC သည်တစ်စုံတစ်ရာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအနေဖြင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောသူများကိုပြန်လည်ခေါ်ယူသည်။
• eWIC ၏အစဉ်အလာအရ၊ ပင်လယ်ရေကြောင်း၊ ပင်လယ်ဓားပြတိုက်ဖျက်ရေး၊
• EWIC မှသတင်းအချက်အလက်ရယူရန်။ အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး သည်သင့်အားပြန်လည်ခေါ်ယူသည်။ သင့်အနေဖြင့်သတင်းပို့ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
• PIN နံပါတ်ကိုအလိုအလျောက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အချက်အလက်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်။
• WIC“ Alimentos Autorizados por” မှသင်တန်းပို့ချခြင်း။
သင်ငါ့ကိုအကြောင်းကြားပေးသည် (impresos al reverso) WIC မှအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့်မိသားစုများကိုပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မရှိကြောင်း၊ WIC မှအငြိမ်းစားယူမည့်သူများ၏အနာဂတ်အတွက်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိသည်။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသည်ဗဟိုအစိုးရဖြစ်သည်။ သူသည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ညီမျှမှုကိုမှန်ကန်စွာခွဲခြားထားပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များကိုသူသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ပြသည်။ WIC ၏အရင်းအမြစ်များကိုလက်ခံရရှိသူများအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိအချက်အလက်များအနေဖြင့် WIC ၏အရင်းအမြစ်များကိုမပါ ၀ င်နိုင်ပါကအဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုများအားလိမ်လည်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သည်။
သင်ခန်းစာယူရန်, သင်သူသို့မဟုတ်သင်ကြားပေးသူသို့မဟုတ်သင်ကြားပေးသူသည်သင်ခန်းစာယူထားသည်, ဒီသင်ခန်းစာအတွက်လိုအပ်သည်။ WIC သည်ဒီဇိုင်းဆွဲသူသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူဖြစ်သည်။ WIC ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် WIC ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ သင့်တွင်တာ ၀ န်ယူမှုရှိရန်တာဝန်ရှိသည်။ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိစေရန်ကူညီပေးပါ။
WIC သည်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ကိရိယာများနှင့်ဆက်သွယ်မှုများအပြည့်အဝဆက်သွယ်နိုင်သည်။ Usted puede solicitar သည်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းမှမရှိပါ။ အဘယ်သူမျှမ recibir စာသား, mande mensaje de texto al número 22300 con la palabra STOP ။
WIC အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ယူအက်စ်ဒါရိုက်တာသည် Salud de Utah မှဌာန၏အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ WIC ၏အချက်အလက်များလျှို့ဝှက်စာရွက်စာတမ်းများကို WIC ၏လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ရရှိနိုင်သောအစီအစဉ်များ၊ ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများအတွက်အစီအစဉ်များ၊ Utah ၏အပြုသဘောဆောင်သောစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အစီအစဉ်များအတွက်ရိုးရှင်းလွယ်ကူမှုအတွက်ယေဘူယျအားဖြင့် Utah မှတစ် ဦး အကဲဖြတ်လေ့လာမှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအား WIC မှသတင်းအချက်အလက်ရယူခြင်း
USDA၊ (အေဒီ -၃၀၂၇) ၏တရားဝင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ USDA, ကြံ့ဖွံ့ USDA, အဘယျသို့ကနြွးမာရေးကောငျးဝနျဆောငျမှုသို့မဟုတျကြံ့ဖွံ့သညျလညျးကောငျးမှသတင်းအချက်အလက်ရယူရန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရယူရန်။ တစ် ဦး solicitar una copia del formulario က de denuncia, llame al (3027) 866-632 ။ USDA မှ: (၁) ဆက်စပ်မှု - အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးရုံး၊ ၁၄၀၀ ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရိပ်သာလမ်း၊ SW၊ ၀ ါရှင်တန်ဒီစီ၊ ၂၀၂၅-၉၄၁၀; (9992) ဖက်စ်: (1) 1400-20250; ဏ (၃) ဆက်တိုက်လျှပ်စစ်: program.intake@usda.gov